Igumbi lokulala eliyi-1 eliphephile linezici zendawo yokubhukuda nezokuzivocavoca: G3 - I-Airbnb
Igumbi lokulala eliyi-1 eliphephile linezici zendawo yokubhukuda nezokuzivocavoca: G3
U-Kersti Ungumbungazi ovelele
* * Siyazi ukuthi uxhumano luyisihluthulelo... sinikeza ukufinyelela KWE-WIFI okusheshayo ezivakashini.* * Ifulethi elinekamelo lokulala elinekamelo lokulala elilodwa elinekhishi elinakho konke, indawo yokuphumula/igumbi lokudlela kanye negumbi lokugeza eliseduze. Ngokwezempilo yakho, sinendawo yokuzivocavoca nendawo yokubhukuda yokuzivocavoca kanye nomshini wokukhipha amanzi okuphuza. Ukuze uhlale ngokunethezeka, sinejenereyitha ezimele, umthombo osendaweni, namathangi amanzi. Ukuze uphephe, sinokuvikeleka kuka-24/7 kanye nocingo lukagesi. Sinabo abaphathi basendaweni kanye nabasebenzi abazinikezele ukukhonza.
Ukuze ungene kuleli fulethi uzongena endlini ngesango eliyinhloko lokuvikeleka, bese wehla ezitebhisini uya ezingeni lengadi yendlu. Iseduze nendawo yokuzivocavoca, cishe amamitha angu-20 ukusuka engadini. Indawo yokuphumula/yokudlela/ikhishi yigumbi elilodwa elinomoya oshisayo nophahla oluphakeme. Ifasitela elikhulu libheke kwelinye i-bungalow ngaphesheya ukusuka endaweni yokungena. Amafasitela asekamelweni lokulala nasegumbini lokugezela aya esangweni lokuphepha eliyinhloko lokungena. Sizamile ukunikeza isidingo sokuhlala ngokunethezeka e-Kumasi, e-Ghana. Iyunithi ihlanganisa ikamelo lokulala elilodwa elinendlu yokugezela engemuva negumbi lokuphumula/igumbi lokudlela/inhlanganisela yekhishi egumbini elingaphambili. Kukhona isiqandisi, i-cooktop kagesi, i-microwave, i-toaster, i-blender, i-rice cooker, umshini wokwenza ikhofi neketela likagesi elisetshenziswa izivakashi. Siphinde sihlinzeke ngesitsha sokukhipha amanzi ashisayo/abandayo esinamabhodlela amakhulu amanzi amancane e-Voltic ukuze asetshenziswe yizivakashi. Ngaphezu kwalokho sine-flat screen tv kanye nesistimu yomsindo ye-Bluetooth yokulalela nokubuka kwakho injabulo. Ngokuhlanza izingubo sinikeza umshini wokuwasha, i-ayini nebhodi loku-ayina. Futhi ekugcineni kukhona umshini wokomisa izinwele.
I-Adiebeba iyindawo enhle etholakala kalula eduze nesikhungo sezohwebo saseKumasi, e-Adum. Umaki wendawo oseduze yi-Ahodwo Roundabout. Siseduze nezindawo eziningi zokudlela ezinhle namakhemisi. I-Melcom kanye nabahlinzeki bezithelo nemifino kuyindlela nje efushane. Siku 2 km ukusuka eGolden Tulip naseRattray Park. Uma uthanda isiShayina esihle iRoyal Garden ingu-500M, kanti i-Alliance Français iwuhambo olufushane lwemizuzu eyi-10. Sikuhambo lwemizuzu eyi-10 ukuya emakethe edumile yase-Kejetia e-Adum. Iklabhu yegalofu iyimizuzu emi-5 ukushayela. Futhi iKumasi Mall esanda kuvulwa iyimizuzu emi-5 ukushayela. Indawo inhle kakhulu.
Silungise uhlu olungezansi lwezinketho ezahlukene ngamabanga ukusuka eGrace Court njengereferensi:
I-Melcom: 400 M
IGame Kumasi Mall: 2.6 km
Inxanxathela yezitolo yakwaShoprite Kumasi: 2.6 km
Ukuhweba kwe-Opoku: 3.1 km
I-Life Supermarket: 3.5 km
Amakhemikhali Aqinile: 2.8 km
Izindawo zokudlela / Amahhotela:
Royal Park Ihhotela (Chinese) : 350 M
I-Golden Bean (yamazwe ngamazwe) : 1.1 km
Indlu yeNobel (isiShayina): 1.1 km
IPiri Piri Ukudla Okusheshayo: 1.5 km
I-Starbite: 2.1 km
I-Golden Tulip (yamazwe ngamazwe): 2.4 km
I-View Bar & Grill: 2.5 km
I-Kumasi Mall Ehlukahlukene: 2.6 km
- I-Sweet Rose Chinese
I-Moti Mahal Indian: 2.6 km
I-Han Court Chinese: 3.3 km
I-Aboude Fast Food: 4.1 km
Ikhishi lami: 4.2 km
I-Ike's Cafe and Grill: 4.8 km
UJofel waseGhana: 7.2 km
I-Vienna City: 1.7 km
I-Golden Tulip: 2.4 km
Indawo: 2.3 km
Iphabhu ye-Bulldog: 3.8 km
Ibha yezemidlalo yase-Ol'Lady & Lounge: 3.5 km
Ibha ye-S (Soul's Bar): 5.1 km
I-X5 Pub: 6.0 km
I-Vienna City kanye ne-Ike's Cafe and Grill zinikeza ukudla kwasebusuku kakhulu.
I-Royal Golf Club: 1.6 km
I-Rattray Park: 2.3 km
I-Armed Forces Museum: 3.7 km
I-Okomfo Anokye Sword Site: 4.2 km
Imakethe yaseKejetia: 4.4 km
I-Manhyia Palace: 5.3 km
Isikhungo Sezamasiko kanye ne-Prempeh II Museum: 5.6 km
Ezinye izimpawu zomhlaba:
Ubude: 3.7 km
Isikhumulo sezindiza saseKumasi: 8.2 km
I-Wood Carving Village
I-Kente Weaving Village
UNana no-Albert bazotholakala ukuze bakusize nganoma imiphi imibuzo ongase ube nayo.
Sinabo abaphathi basendaweni abazokujabulela ukusiza nganoma yini ukwenza ukuhlala kwakho kube ntofontofo futhi kube mnandi.
Abaphathi bezindlu zethu ngu-Nana no-Albert. Zizwe ukhululekile ukuxhumana nabo nganoma yimiphi imininingwane.